Archives aJuly 2020
Mashandisiro Atingaite Gitlab Nhaurwa dzekutsvagira Software Kugadzira
Zvinyorwa zveGitlab chishandiso chemahara chakavakirwa muGitlab Cloud uye Nharaunda Editions izvo zvinoita kuti zvive nyore kuteedzera software kusimudzira kufambira mberi. Iyo inotsigira mazhinji akafanana maficha seanokwikwidza saJira, nepo zviri nyore kushandisa. Kutanga Kana iwe wakamboshandisa Jira, Trello, kana imwe Kanban-based sangano software, iwe uchawana Gitlab Issues kuti ive inozivikanwa. Zvisinei, iyo… [Verenga zvakawanda ...] nezve Mashandisiro Ekushandisa Gitlab Nyaya dzeKutevera Software Kuvandudza
Xiaomi's spin-off smartphone brand POCO nguva pfupi yadarika yakawedzera portfolio yayo nekupinda nyowani muIndia kutanga kwemwedzi uno. Kusiyana neakare mafoni ePOCO mafoni akanangisa iwo asingadhuri mureza uye epakati-renzvimbo nzvimbo, iyo POCO M2 Pro iri kunongedza chikamu chebhajeti panguva ino kutenderera. Kwete kuti hapasisina vanokwikwidza vanokwikwidza bhajeti nzvimbo, nokudaro vachiwedzera kumutengi… [Verenga zvakawanda ...] nezve POCO M2 Pro Ongororo - Yakagadziridzwa Redmi Cherechedzo 9 Pro
Kuteerera kwaungaita WhatsApp Voice manzwi zvine hungwaru kuburikidza nefoni yako yekuzeya
WhatsApp manotsi ezwi akanaka kukurumidza kutaurirana. Pakudzvanya bhatani, unogona kukurumidza kushandura kubva kutaipa mameseji kushandisa izwi rako kutumira mameseji. Izvi zvinonyanya kubatsira kana iwe uchida kuwana poindi nekukurumidza, kana nenzira inoda rumwe ruzivo kana manzwiro ayo iwo akajeka mameseji meseji asingakwanise kupa. Zvisinei, kuva nemumwe munhu padyo newe kutumira… [Verenga zvakawanda ...] nezve Maitiro ekuteerera kuWhatsApp Izwi manotsi zvakangwara kuburikidza nefoni yefoni
Samsung Galaxy Note 20 Ultra vs Galaxy Note 20: Ndeupi musiyano uripo?
Samsung ine mhando mbiri nyowani dzeSamsung Galaxy Note mupombi - iyo Galaxy Note 20 Ultra uye yakajairwa Galaxy Note. Sezvo vateveri venhevedzano vachayeuka, mu2019, Samsung yakapa maviri masayizi efoni iyi, ichitora Chinyorwa 10 chidiki uku ichisunda Cherechedzo 10+ semhando yakakura saizi. Muchokwadi, yaive Cherechedzo 10+ yaive iyo yechokwadi mutsivi weChereched korona, nepo… [Verenga zvakawanda ...] nezve Samsung Galaxy Note 20 Ultra vs Galaxy Note 20: Ndeupi mutsauko uripo?
Google's Yemahara Yekutumira Yekutengesa pane Mapikicha Mabhuku Anogona Kucheka Mutengo muHafu
Nezvikonzero zvakasiyana, Google Mifananidzo ndeimwe yeakanakisa ekuchengetedza gore masevhisi emifananidzo yese yaunotora. Imwe yemabhenefiti mazhinji ndeyeGoogle Mifananidzo Mapikicha Mabhuku, ayo anokutendera iwe nyore kugadzira Photo Book kubva kune ako maarubhu. Asi, kutumira kunogona kudhura, dzimwe nguva zvakanyanya kufanana nebhuku racho. Ita chiito izvozvi, uye iwe unogona kutsika mari yekutumira. Kana wakamboshandisa basa rekudhinda mapikicha,… [Verenga zvakawanda ...] nezveGoogle Yemahara Yekutumira Yekutengesa pane Mapikicha Mabhuku Anogona Kucheka Mutengo muHafu
Enda kune peji 16